Xayeysiis - Cakaara News
Degaanka Hambalyo Xayeysiis Wararkii Hore
60 Ka Tirsanaa Nabad-Diidka UBO oo Isa Soo Dhiibay
Qabri-Dahar (CakaaraNews) Warar aanu ka helnay wariyayaasha shabakada CakaaraNews ee Gobolka Qoraxeey ayaa sheegaya in 60 ka mid ah nabad-diidka UBO ay isku soo dhiibeen ciidamada dawlada ee ku sugan Gobo0lka Qoraxeey.
Wararku waxay intaa ku darayaan in 60 ka mid ah nabad-diidka ubo ee isa soo dhiibay ay iskood isku soo dhiibeen kadib markii ay u adkaysan waayeen dhibaatada ay shacabka ku hayeen.
Wariyaha CakaaraNews ee Gobolka Qoraxeey oo la kulmay qaar ka mid ah nabad-diidka soo xerooday ayaa noo sheegay in nabad-diidku ay cid u soo dirsadeen dawlada iyagoo hubkooda wata isla markaana ay go'aansadeen inay soo galaan.
Mid ka mid ah nabad-diidka soo xerooday oo hogaaminayay kooxda nabad-diidka ee isa soo dhiibtay oo magaciisa la yidhaahdo Cabdiramaan Muuse (Cabdi Dheere) ayaa wariyahayaga u sheegay in sababta ugu wayn ee uu u soo xerooday inay tahay kadib markii lagu amray inuu dad shacab ah laayo oo isaguna uu qaadan kari waayay.
"Waxaa amar la igi siiyay inaan si dhuumaalaysi ah aan ku tago qabalee, isla markaana aan rasaas ku furo shacabka maalinta Axada ee soo socota codka bixinaya" ayuu yidhi Cabdi Dheere.
Isagoo hadalkiisa sii wata ayaa waxaa uu Cabdi Dheere sheegay inay qaadan waa ku noqotay inuu dad shacab ah oo masaakiin ah oo aan waxba galabsan uu u laayo xoriyada dimuqraadiga ah ee ay cosobsanayaan awgeed, "Hadii dadku ay wax dooranayaan waa xoriyad dimuqraadi ah, dadka wax dooranaya iyo kuwa la dooranayaba ma aha dad meel kale ka yimid ee dadkii aan la dhalanay ee Degaanka" ayuu Cabdi Dheere yidhi.
Wuxuu Cabdi Dheere sheegay in markii uu go'aansaday inuuna wax xabad ah ku ridin dad shacab ah oo safaf dhaadheer kaga jira qabalee ay ka qaadanayeen kaarsha cod bixinta, uu hadana u noqon wayday inuu ku noqdo nabad-diidkii uu ka tirsanaan jiray oo uu ka baqay inuu shacabka uu ka baaqsaday dilkooda awgeed ay u dilaan.
Si kastaba ha ahaatee, tani waxay muujinaysaa in maanta xataa nabad-diidkii ugu damiirka xumaa ee ubo ay qaarkood gar waaqsadeen in laynta shacabka lagu hayo, iyo ka hor istaagida horumarka iyo xaqa shacabka ay u leeyihiin inay cosobsadaan xuquuqdooda dimuqraadiga ay tahay danno lagu curyaaminayo qawmiyada Degaanka Soomaalida.
22 Shuftay oo Lagu Dilay Dagaal Liyuu Boolisku Ku Qaadeen Nabad-Diidka Agagaarka Garoonka
Nus-Dariiq (CakaaraNews) Warar degdeg ah oo naga soo gaadhay Nus Dariiq ayaa sheegaya in Ciidanka Sida Gaarka ah u Tababaran ee Degaanka Soomaalida ee loo yaqaano Liyuu Booliska ay maanta agagaarka meesha la yidhaahdo Garoonka oo ku taala Dhulka Ciid ay ku dileen 22 nabad-diidka ubo ka tirsan.
Wararku waxay intaa ku darayaan in Ciidanka Liyuu Boolisku ay nabad-diidka ka furteen hub tiradiisu gaadhayso 17 qori, iyagoo nolol ku qabtay 4 shuftay oo ka tirsanaa nabad-diidka ubo.
Wararka oo aan ka helnay xidhiidh toos ah oo aan la yeelanay Shaalaqaha hogaaminaya Ciidanka Liyuu Booliska ee fadhigiisu yahay Nus Dariiq ayaa waxay sheegayaan in afarta nolosha lagu qabtay ay bad qabaan oo dhawaan waraysi lala yeelan doono. Dhinaca kale, shacabka Nus-Dariiq iyo degaanka Ciid ayaa laga soo sheegayaa inay farxad la damaashaadayaan maadaama guushaas ay soo hooyeen ciidanka Liyuu Booliska
Waxaan akhristayaasha ku wargalin doonaa in aanu waraysiyadaa oo muuqaal video ah aan idiin soo baahin doono.
75 Xubnood oo XDSHS Umatalaya Golaha Xildhibaanada Maamulka M/Jigjiga ayaa Shacabka Lasoo Hor Dhigay.
Jigjiga (CakaaraNews) Doorashooyinka wareega 4aad kadhici doona dalka ayaa Xisbiga Dumuquraadiga Shacbiga Soomaalidu usoo xulay 75 xubnood oo matalaya Golaha Maamulka Magaalada Jigjiga ayaa maanta bulshada loosoo ban dhigay.
Shirkan oo gudoominayay Duqa Maamulka Magaalada jigjiga Mudane C/salaan Axmad oo dadwaynaha horteeda lasoo hor istaajiyay 75 tan Xubnood ee XDSHS umatalaya Golaha Wakiilada Magaalada jigjiga.
Xubnahan oo 25% ay yihiin Haween lagu soo xushay aqoontooda anshaxooda iyo fikirkooda,halka 65% ay yihiin da'yar dhalinyaro ah, heerar kooda waxbarashana ay kalayihiin BSC,BA iyo MASTER,kooga ugu hooseeyaana uu heer kiisa waxbarasho yahay 12th taas oo ka marag kacaysa in xubnahani tusaale uyihiin isbadalka horumarineed ee Xisbiga Dimuquraadiga Shacabka Soomaalidu gaadhay isbadal wayn oo horumarineed.
Waxaa 75 tan kan xubnood loo bandhigay shacabkii ay matalayeen in ay fikiraddooda iyo doodo kayeeshaan xubnahan taas oo gabi ahaanba 100% ay cod buuxa oo kalsooni siin ah ku taageereen kuna tilmaameen dadkii shirkaani kasoo qaybgalay in ay tahay markii uhoraysay ee sidan oo kale bulshada loosoo ban dhigo cidii matali lahayd oo waliba ay soo xusheen dad da'yar ah.
Dhinaca kale haweenkii halkaasi kahadlay ayaa xubnahani tirada badan ee haweenka utartamaya Golaha Xildhibaanada Ismaamulka jigjiga ay utahay waa cusub oo usoo baxay xaq iyo xuquuqdoodii ka qayb galka haweenka ee dhinaca siyaasada iyo horumarka Deegaanka.
Ugu danbayntiina waxay bulshadani taageertay 75 kan xubnood ayaa ugu baaqay kana codsaday in marka lasoo doorto ay xilkii loo doortay gutaan una adeegaan bulshada soo dooratay kana shaqeeyaan sidii magaladani horu mar waara oo dhinaca bilicdeeda isbadal ugu keeni lahaayeen.
hadaba xubnahan 75 ka ah ayaa waxa ay magacyadoodu kala yihiin sida tan:-
Xasan Muxumad Xasan
Maxamad Yuusuf C/wahaab
Kulmiye Maxamad Dool
Ilyaas Cumar Ibraahin
Hibo Sh/Axmad Habane
Foosiya Maxamuud Are
Axmad Cumar Dimacade
Cali Yuusuf Aadan
Xasan Maxamad Adan
C/fataax Maxamud Xuseen
Xasan Bile C/samad
Ayaan Xasan Maxamad
Maxamuud Maxamad Ciise
Jacfar Muxumad Axmad
Axmad Maxamad Habane
Dayib Maxamad Jibriil
Maxamad Cabdi Digaale
Axmad Nuur Maxamad
Hibo Cabdi C/laahi
Safiya Maxamad Xaaji
Guleed Cali Yaanbo
Cali ---- -------
Cali Nuur Xuseen
Maxamad Axmad Carab
C/xakiin Maxamad Cali
Xaashi C/laahi Shide
Raligalin akhristayaasha ka codsanaynaa wixii naga qaldama ee magacda ah ama aan katagno magacdoo sadexan iyo halka qofee aanu magaciisa ananu helin
Waxaa sidoo kale madasha shirkaasi lagaga dhawaaqay laguna soo ban dhigay xubnaha utar tami doona xildhibaanada heer Degaan iyo heer Fadaraal ee Dagmadani jigjiga oo kala ah sida tan:-
Cumar Xaaji (Madaxa xafiiska maaliyada DDS)aqoontisuna Mastarayt, Heer Deegaan
Xaaji Yuusuf (k/xigeenka Duqa M.Magaalada jigjiga) Heer Deegaan
Cabdi jaamac H.DEEGAAN
Bashiir Cali Mahdi Heer Federal jigjiga qaybta 1aad
C/laahi Maxamed (Gisile) Heer Federal jigjiga qaybta 2aad
A/Deeq Maxamed Qabyo (aqoonta B.A Degree) shaqada jj University H.DEEGAAN
Cabdi Maxamed (pcdp) Masterayt H.DEEGAAN
Guuleed Aw Cali (Madaxa xafiiska x/jaaliyadaha DDS) H.DEEGAAN
Xirsi Maxamed Dool (Gudoomiyaha Maamulka Degmada Jigjiga) H.DEEGAAN
Dr.Nimcaan Xamaro (Xafiiska cilmi baadhista Shaqaale Katirsan) H.DEEGAAN
Waxaa iyaguna malinta bari ah lasoo hor joojin doonaa xubnaha utartamaya Golaha Xildhibaanada Heer Qabalee ee Magaaladani Jigjiga.
Barwaaqada Degaanka Ka Dilaacday Waa Amar Eebbe, Heshiiska Ethiopia & UWSLF Waa Amar Alla
Jigjiga (CakaaaraNews) Sida la wada ogsoon yahay, waxaa ka soo wareegtay muddo bil ah xilligii uu bilaaabmay wadahadalka nabada ee u dhexeeya dawlada Itoobiya & Ururka UWSLF.
Hadaba intii ka danbeeysay waxaa degaanka Soomaalida lagu arkay ummuuro badan oo muujinaya muwaafaqada iyo wanaaga ay leedahay nabada iyo wada noolaashaanhaha shacabka. Roobabkii bilaabmay maalintaas ayaa ilaa haata ka daya Degaanka Soomaalida.
Dhamaan Degaanka Soomaalida waxaa laga wada dareemay barwaaqada qayrul caadiga ah ee maanta laga arkayo dhulka oo idil. Waxaa dadka qaarkii ay sheegayaan in barwaaqadan aan dhawaanahan muddadii 30ka sanno ahayd ee u danbaysay aan lagu arkin degaanka Soomaalida.
Wadahadalka Nabada ee u dhexeeya dawlada Itoobiya & Ururka UWSLF wuxuu maanta furay bog cusub oo leh rajo iyo yididiilo san oo laga qabo mustaqbalka Degaanka Soomaalida.
133,938 Codbixiye Ayaa Iska Diwaangaliyay Gobolka Shiniile
Shiniile (CakaaraNews) Wararka Gobalka Shiniile naga soo gadhaya ayaa sheegaya kudhawaad 133,938 Codbixiye Ayaa Iska Diwaangaliyay Doorashada islamarkaasna qaatay kaarashii codbixinta ee gobolka shiniile ee DDS.
Iskuduwaha Xidhiidhka Doorashooyinka ee Gobolkaasi Shiniile DDS,Yuusuf Ibraahim Kamil oo maanta u waramayay warbaahinta ayaa u shegay in tirada dadkaas laga diwaan galiayay 214 Goob Doorasho oo laga sameeyay 6 Dagmo ee Gobolkaasi Shiniile ka kooban yahay.
Ugu danbayntiina isku duwuhu wuxuu tilmaamay in ku dhawaad 300,000 oo codbixiye lafilayo in ay isi soo diwaan galiyaan ilaa 8 bisha April ee 2010 isla marikaasina ilaa hada geedi socodka diwan galinta doorashadu usocdo si habsami iyo nabadgalyo ah.
Iskashatada Beeralayda Hani Oo Ku Gulaysatay Siidhkii Usiiyay Xafiiska Beeruhu
9 Shuftada UBO ah oo Lagu Dilay Godey